Mozilla Inoburitsa Firefox 67.0.3 kuKurumidza Kugadzirisa Zero Zuva Kutambura | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla Inoburitsa Firefox 67.0.3 kuIkurumidzira Gadzirisa Zero Zuva Kutambura
Si uri mushandisi weFirefox, rega ndikutaurire kuti inguva yekuvandudza bhurawuza rako hongu kana hongu. Uye izvo munguva pfupi yapfuura zero zero kushushikana kwakawanikwa mu browser uye iri kushandisirwa zvakanyanya mukurwisa kwakanangwa.
Iko kutyora kwekuchengetedza yakaziviswa kuburikidza neGoogle Project Zero uye inokanganisa ese mavhezheni eFirefox. Zvisinei, nhau dzakanaka ndedzekuti pane chigamba chinowanikwa kubva muna Chikumi 18 muFirefox 67.0.3 uye Firefox ESR 60.7.1 shanduro.
Pamusoro pezvo, Mozilla inokurudzira zvakanyanya vashandisi kukwidziridza.
1 Nezve kutyora kwekuchengeteka
2 Maitiro ekuvandudza Firefox browser paLinux?
Nezve kutyora kwekuchengeteka
Mune tsamba yekuchengetedza, Mainjiniya eMozilla akapa tsananguro pamusoro pemhando yekukanganisa.
Kunze kwerondedzero pfupi yakatumirwa panzvimbo yeMozilla, hapana zvimwe zvakadzama nezve kuchengetedzeka kwekuchengetedzeka kana kurwiswa kuri kuitika.
Mushure mekukumbira kwekuwedzera rumwe ruzivo, Ivo vanotaura kuti iyo bhagi inogona kushandiswa kuitisa kure kodhi kuitisa (RCE), asi ipapo zvinoda kutiza kwakasiyana kubva kubhokisi rejecha kuti umhanye kodhi mune yepasi pesisitimu.
"Zvisinei, zvingangoita kuti inogona kushandiswa mukunyora muchinjikwa, izvo zvinogona kukwana zvichienderana nezvinangwa zveanorwisa," vakawedzera.
Cross-saiti kunyorera (kupfupiswa kuXSS) mhando yewebhusaiti yekuchengetedza kukanganisa iyo inobvumidza zvemukati kuiswa jekiseni mune peji, zvichikonzera zviito mumabhurawuza ewebhu anoshanyira peji.
Somuenzaniso, Izvo zvinokwanisika kuendesa kune imwe saiti ye phishing kana kubira chikamu nekutora makuki.
Kune rimwe divi, ivo zvakare vanopokana kuti havana ruzivo parizvino nezvenzira iyi zero zuva rekukanganisa raishandiswa mubrowser kuti Coinbase Security inogona kudzidza zvakawanda nezve zvakawanikwa kurwisa.
"Ini handina zano nezve chikamu chine chekuita nekushungurudza vanhu. Ndakawana ndikamhan'ara chirwere ichi musi waApril 15, "akadaro muongorori wezvekuchengetedzwa kweGoogle.
Nekudaro, vamwe vangangoti zvichibva pane chimwe chikamu chakazivisa gomba rekuchengetedza (Coinbase Security), tinogona kufunga kuti gomba rekuchengetedza iri rakashandiswa panguva yekurwiswa kwevaridzi ve cryptocurrency
Maitiro ekuvandudza Firefox browser paLinux?
Kuti uvandudze idzva dzekugadzirisa shanduro dzebrowser kune ino uye kunyange kuiisa kana usina, unogona kuzviita nekutevera mirairo yatinogovana pazasi.
Imwe nzira yekumutsiridza bhurawuza kune yazvino vhezheni ndeyekuvhura bhurawuza uye nekudzvanya chiratidzo chemubvunzo mune bar yemenyu.
Pano tave kuzosarudza "About Firefox" uye izvi zvinobva zvatanga kurodha pasi uye kumisikidza vhezheni itsva.
Firefox yakaburitswa gadziriso iri 67.0.3 uye 60.7.1, umo kunetseka kwakanyanya (CVE-2019-11707) kwakagadziriswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Mozilla Inoburitsa Firefox 67.0.3 kuIkurumidzira Gadzirisa Zero Zuva Kutambura